सापारु पर्वको सौन्दर्य- विविधा - कान्तिपुर समाचार
सापारु पर्वको सौन्दर्य
भाद्र कृष्ण प्रतिपदाका दिन स्वर्गको द्वार खुल्ने विश्वासमा मृतकका नाममा प्रतीकात्मक गाई बनाएर वैतरणी नदी पार गराउन सापारु पर्व मनाइन्छ ।
भाद्र ११, २०७५ ओम धौभडेल
काठमाडौँ — आज भाद्र कृष्ण प्रतिपदा । अर्थात बलिवर्द प्रतिपदा । वृषभ प्रतिपदा पनि भनिन्छ । यस दिन नेवार बस्तीमा सापारु तथा गाईजात्रा पर्व मनाइन्छ । नेवार समुदायले वर्षभरि दिवंगत भएका आफन्तका नाममा प्रतीकात्मक गाई बनाएर नगर घुमाउँछन् । यसलाई ‘सायात’ भनिन्छ ।
‘साँ’ भन्नाले गाई र ‘यात’ भनेको यात्रा वा जात्रा । तर यहाँ साँ भनेको गाईभन्दा बसाहालाई बढी प्राथमिकता दिएको आभास हुन्छ ।
साना–ठूला नेवार बस्तीमा आ–आफ्नै शैली तथा परम्परा अनुसार सापारु पर्व मनाउने चलन छ । काठमाडौंमा दिवंगत व्यक्तिको सम्झनामा ससाना बालबालिकालाई सिंगारपटार गरी गाईको चित्र अंकित कागजको मुखुन्डो तथा सिङ लगाई बसन्तपुर दरबार हनुमानढोका दरबार लगायत पुरानो नगरक्षेत्र घुमाउने गरिन्छ ।
कम्मरमा पटुका बाँधी दुई छेउ भुइँमा लत्रिनेगरी नगर परिक्रमा गर्ने भएर यसलाई बासा लुयेगु पनि भनिन्छ । कसै–कसैले साना केटालाई शिरमा सेतो वा पहेँलो फेटा बाँध्न लगाई हातमा चिम्टा र कमलको फूल बोकाएर फकिरका रूपमा नगर घुमाउने गर्छन् । कसैले जिउँदो गाईलाई सिंगार गरी नगर परिक्रमा गराउँछन् । पाटन नगरमा चार दिन अगाडि नायखीं च्वयेके भनी नगरभरिमा वर्षभरि दिवंगत भएका व्यक्तिको सम्झनामा तोकिएको ठाउँमा जम्मा हुन सूचना दिइन्छ ।
सापारुको दिन तोकिएको ठाउँमा जम्मा भई बसाहाको मुखाकृति लगाएको केटाहरू अगाडि लगाइन्छ । त्यसपछि पहेँलो कपडा ओढाइएका गाई र कुचो, गाईको दूध, लावा, अविर, चमर पंखा आदि लिएका केटी हुन्छन् । त्यस पछाडि राधाकृष्ण र गोपी–गोपिनीको भेषमा नगर परिक्रमा गरिन्छ ।
भक्तपुरको सापारु विशेष मानिन्छ । भक्तपुरमा सापारु पर्व सुरु भएको संकेत अघिल्लो दिन अर्थात श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिनै हुन्छ । त्यस दिन भक्तपुरको पूर्व फर्केका नौवटा ढुङ्गेधारामा मुख धुने चलन छ । बिहानपख किसानहरू आआफ्नो खेतमा गई भ्यागुतोलाई क्वाँटी रोटी ख्वाई पूजा गर्छन् । जसलाई ब्यां जा नकेगु भनिन्छ । घर–घरमा नौथरी गेडागुडीले बनेको क्वाँटी, रोटी खाने गरिन्छ । भक्तपुर व्यासीस्थित कालदह, भक्तपुर नगरकोटस्थित महादेव पोखरी लगायत ठाउँ–ठाउँमा मेला लाग्छ ।
साँझपख भक्तपुर तलेजुबाट घेन्ताघिंसी नाचले भक्तपुर नगर परिक्रमा गर्छ । मध्यरातदेखि दिवंगत व्यक्तिहरूका नाममा भक्तपुरवासीले प्रतिकात्मक गाई घुमाउने गर्छन् । बिहान वर्षभरिमा दिवंगत ससाना बालबालिकाको सम्झनामा डोकोमा बनाएका गाई अर्थात दोकचा सा नगर परिक्रमा गराइन्छ ।
कसै–कसैले कालो माटोको बसाहा बनाई सिंगारिएको खटमा राखी बाजागाजाका साथ नगर परिक्रमा गराउँछन् । ससाना बालबालिकालाई सिंगारपटार गरी कम्मरमा पटुका बाँध्न लगाएर दुई टुप्पो भुइँमा लत्रने गरी घुमाउनेलाई वासा लुयेगु भनिन्छ ।
भक्तपुरको सापारुको आकर्षण ताहासां अर्थात चारवटा लामा बाँसबाट बनेको गाई हो । विशेषगरी पाका उमेरका दिवंगत व्यक्तिहरूको सम्झनामा घरको दुई तल्लाजति अग्लो ताहासां बनाइएको हुन्छ । ताहासांको अगाडि बालकदेखि वृद्धसम्म बाजाको तालमा लठ्ठी जुधाई घेन्ताघिंसी नाच्दै आउँछन् ।
नाचका साथ विभिन्न प्यांख तथा नाटक देखाइन्छ । मृतकका नामबाट गाई नगर घुमाउनुअघि आआफ्ना पुरोहित बोलाई विधिवत् पूजा गराउने चलन छ । घरको पिखालखु अगाडि बलेसीमुनि राखी विधिवत् पूजा तथा गौदानसमेत गर्नुपर्छ ।
साँझतिर भक्तपुर वडा नं. ४ स्थित लाकुलाछेबाट परालले मात्र बनेको सुयाम्ह भैल द्य: र भद्रकालीको ताहासां घेंताधिंसीको साथ नगर परिक्रमा गराएपछि अन्य प्रतिकात्मक गाई ल्याउने कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । गहिटीबाट अग:लोंह झंया–झंया पाउं बाजाको बोलका साथ चुपिंघाटमा लगि विसर्जन गरेपछि गाईजात्रा सम्पन्न हुन्छ ।
मानिसझैं देवदेवीको पनि मृत्यु हुन्छ भन्ने भावनाका साथ प्रत्येक वर्ष परालले बनेको सुयाम्ह भैल द्य: र भद्रकालीको ताहासां घुमाउने चलन छ । भक्तपुरको सापारु आठ दिनसम्म विभिन्न देवदेवीको जात्रा गरी कृष्णाष्टमीको दिन समापन हुन्छ ।
सापारु पर्व नेवार समुदायको मौलिक पहिचान हो । एकथरी इतिहासकारले सापारु पर्वको चलनसँग कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लको नाम जोडेको पाइन्छ । उनका कान्छा छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको अल्पायुमै निधन भएपछि शोकाकुल रानीलाई सान्त्वना दिन उनले यो पर्व चलाएको कथन छ । सापारु पर्वको श्रेय भक्तपुरका राजा जगतप्रकाश मल्ललाई दिने इतिहासविद् पनि भेटिन्छ ।
कोही–कोहीले श्रेय पाटनका राजा सिद्धिनरसिंह मल्ललाई दिने गरेको छ । जयस्थिति मल्लको शासनकाल अर्थात ने.सं. ५०९–१० तिर एकजना भक्तपुरबासी विद्वानले नेपालभाषामा लेखेको गोपालराज वंशावलीको पत्र संख्या ६१ मा ‘सायात’ भनी सापारुबारे उल्लेख गरेका छन् । वंशावलीमा लिच्छविकालदेखिका महत्त्वपूर्ण घटना समेटिने क्रममा सापारु पर्वबारे लेखिएको हो ।
सापारु पर्व नेवारहरूको सोह्र संस्कारमध्ये मृत्युसित सम्बन्धित संस्कार हो । नेवार समुदायमा दिवंगत व्यक्तिका नाममा मृत्युको एघारौं वा बाह्रौंं दिनमा बसाहा डामेर छाड्ने चलन छ, जसलाई वृषसर्ग भनिन्छ । ढुङ्गाको साँढे बनाई गौचरनमा राख्ने चलन पनि थियो ।
यसरी छाडेको साँढेको प्रतिमा ठाउँ–ठाउँमा देख्न सकिन्छ । तर यी दुवै कार्य खर्चिलो र झन्झटिलो हुनाले विकल्पका रूपमा भाद्रकृष्ण प्रतिपदाका दिन गाई (बसाहा) को प्रतीक बनाई नगर परिक्रमा गरेर सापारु मनाइने गरेको हो । बौद्धायन नामको हस्तलिखित ग्रन्थमा बसाहाको मूर्ति बनाएर त्यसलाई भाद्रकृष्ण प्रतिपदाको दिन विधिपूर्वक पूजा गरी आफू बसेको सहर घुमाउनाले वृर्षोत्सर्ग नामको पितृ तंरतारक यज्ञको पुण्य प्राप्त हुन्छ भनी लेखिएको छ ।
गाईजात्रा पद्धति नामको अर्को हस्तलिखित ग्रन्थमा समेत पद्यम पुराण शिववचन भनी भाद्रकृष्ण प्रतिपदा तथा सापारुको दिन वृषभलाई उपयुक्त विधि अनुसार पूजाअर्चना गरी देश परिक्रमा गराई सायंकालमा भित्र्याए वृर्षोत्सर्ग गरेको फल प्राप्त हुने भनिएको छ । गरुड पुराणमा समेत वृर्षोत्सर्ग कर्मको महत्त्वबारे लेखिएको छ ।
सापारुको दिन सायात गर्ने चलन नेवार सभ्यताको सुरुआतदेखि चल्दै आएको हो भन्नेमा अन्योल छैन । भाद्र कृष्ण प्रतिपदाका दिन स्वर्गको द्वार खुल्ने विश्वासमा मृतकका नाममा प्रतीकात्मक गाई बनाएर वैतरणी नदी पार गराउन सापारु पर्व मनाइएको हो । सापारु पर्वका कारण वर्षभरिमा मृत्यु भएकाको तथ्यांक तयार हुन पुग्यो । यसले अकाल मृत्युबाट बच्न र बचाउन सन्देश प्रवाह गर्‍यो ।
लिच्छवि राजा आनन्ददेवले नेपाल मण्डलको राजधानी भक्तपुर बनाएका थिए । त्यस कालखण्डमा भक्तपुर सांस्कृतिक रूपले विशेष थलो बन्न पुग्यो । सापारु पर्वले फस्टायो । यक्ष मल्लपछि भक्तपुरबाट कान्तिपुर र पछि कान्तिपुरबाट ललितपुर विभाजन भइसकेपछि यी तीन राज्यबीच हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसपछि सापारु आआफ्नै शैलीमा विकास भयो । यस पर्वबारे अझ गहन अध्ययन हुनसके थुप्रै सत्य–तथ्य प्रकाशमा आउन सक्छन् ।
प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:१०
१८ औं एसियाली खेलकुद : पदकको सम्भावना झन् कमजोर
जकार्ता — १८ औं एसियाली खेलकुद सुरु भएको नवौं दिनसम्म नेपाल पदकविहीन रहेको छ । पदक आस गरिएको कराँते र बक्सिङको प्रतिस्पर्धामा नेपाली खेलाडीले आइतबार एउटै खेल जित्न सकेनन् ।
नेपालका बक्सर विष्णुप्रसाद घले (रातो) कतारका थुलासिमारनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै । तस्बिर : किरण पाण्डे
महिला भारोत्तोलक तारादेवी पुनले तीन नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरिन् । टेबलटेनिसको प्रतिस्पर्धा सुरु हुँदा त्यसमा पनि नेपाली खेलाडी सफल हुन सकेनन् । एसियाडमा नेपालले भाग लिएको २९ मध्ये १८ खेलका खेलाडीको प्रदर्शन सकिसकेको छ । १ सय ८७ खेलाडीमध्ये टिम गेममा गरी १ सय २३ खेलाडीको प्रतिस्पर्धा सकिएको हो ।
सोमबार जकार्ता इन्टरनेसनल एक्स्पो हलमा सागकी कांस्यपदक विजेता तारादेवीले स्न्याचमा ७४ केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा १ सय १ केजीसहित कुल १ सय ७५ केजीको भार उचाल्दै कीर्तिमान स्थापित गरिन् । स्न्याच, क्लिन एन्ड र कुल सबैमा उनले कीर्तिमान स्थापित गरिन् । ७५ केजी तौल समूहमा खेलेकी तारादेवीकै नाममा थियो पुरानो कीर्तिमान पनि ।
गत जेठमा नेपालगन्जमा सम्पन्न राष्ट्रिय छनोट प्रतियोगितामा तारादेवीले स्न्याचमा ७३, क्लिन एन्ड जर्कमा ९७ केजी र कुल १ सय ७० केजीको कीर्तिमान थियो । एसियाडमा उनले सबै तोडिन् । उनले स्न्याचमा ७० केजीबाट सुरु गरिन् । दोस्रो लिफ्ट ७४ केजी असफल हुँदा त्यसलाई तेस्रो लिफ्टमा सफल पारिन् । क्लिन एन्ड जर्कमा उनले ९३, ९८ र १ सय १ केजी उचालिन् । यसमा दोस्रो लिफ्ट उचाल्दा नै उनको पुरानो कीर्तिमान भंग भइसकेको थियो ।
आफूले उत्कृष्ट प्रदर्शन दिन सकेको उनले बताइन् । ‘एसियाडको प्लेटफर्ममा आएर यसरी कीर्तिमान हुँदा एकदमै खुसी लागेको छ । हरेक प्रतियोगितामा राम्रो दिने प्रयास हुन्छ । त्यसरी नै एकपछि अर्को कीर्तिमान बनाउँदै आएको थिएँ । यहाँ पनि बनाउन सफल भएँ,’ एसियाडको अनुभव बटुलिसकेकी तारादेवीले भनिन् । उनले सन् २०१४ को इन्चोन एसियाड खेलेकी थिइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सबै खेलाडीको सपना पदक भए पनि एसियाली महाशक्ति राष्ट्रसँगको भिडन्तमा त्यो सार्थक हुन गाह्रो उनको तर्क थियो । उनको तौलमा उत्तर कोरियाली जोङ सिम रिमले स्न्याचमा १ सय १६ र क्लिन एन्डमा १ सय ४७ सहित २ सय ६३ केजी उचालेर स्वर्ण जितिन् । उज्वेककी ओमाडेयले २ सय ३७ र कोरियाली मिन्ही मुनले २ सय ३६ केजीबाट रजत र कांस्यपदक जितेका थिए ।
नेपालको भारोत्तोलनमा प्रतिस्पर्धा सकिएको छ । चार खेलाडीले भाग लिँदा तीन खेलाडीले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाए । ओलम्पियन कमलबहादुर अधिकारी, सञ्जु चौधरीले कीर्तिमान बनाए भने विकास श्रेष्ठमात्र कीर्तिमान बनाउनबाट चुके ।
आइतबार तीन खेलाडीले खेल्दा तीनैजना पहिलो खेलमै पराजित भए । महिला ६१ केजीमुनि सुनीता महर्जन थाई खेलाडी आर्म सुकिवासँग ४–१ अंक अन्तरले पराजित भइन् । साउथ इस्ट एसियन गेम्सकी पदक विजेता आर्मले सुनीताविरुद्ध युको र इप्पोनबाट अंक बटुलिन् ।
पुरुष ६० केजीमुनि सोनम लामा भियतनामी भान हाई एनगुएनको सिकार भए । उनी ३–० ले हार्दा सबै अंक युकोबाट गुमाएका थिए । ६७ केजीमुनिका विजय लामा इन्चोन एसियाडका स्वर्ण विजेता हिरातो सिनोहारासँग पराजित भएका थिए । रक्षात्मक खेलेका विजय १–० अंकले हारेका थिए । विजयले पनि इन्चोन एसियाड खेलेका थिए । थुपै्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका पदकधारी हिरातो श्रीलंकन प्रतिद्वन्द्वीसँग ६–२ ले हारेका थिए ।
एसियाडमा ८ खेलाडीलाई सहभागी गराएको कराँतेका ६ खेलाडीले खेलिसकेका छन् । सोमबार दुई खेलाडीको खेल हुनेछ । पुरुष ८४ केजीमुनि दिवस श्रेष्ठ सीधै क्वाटरफाइनलमा खेल्नेछन् । महिलाको प्रिक्वाटरफाइनल चरणमा अनु अधिकारीले मकाउकी चिङ चेउङलाई प्रतिद्वन्द्वी पाएकी छन् ।
नेपालले बक्सिङको तेस्रो दिन पनि सफलता पाउन सकेन । पुरुष वेल्टरवेट ६९ केजीमा विष्णुप्रसाद घले र फ्लाइवेट ५२ केजीमा नेपालका प्रेम चौधरी पहिलो खेलमै पराजित भए ।
विष्णुप्रसाद कतारका ओलम्पियन खेलाडी थुलासिमारनसँग र प्रेम पनि ओलम्पियन फिलिपिन्सका रेगन लादोनसँग अंकका आधारमा समान ५–० ले पराजित भए । रेगन एसियन च्याम्पियनसिप तथा साउथ इस्ट एसियन गेम्सका रजत विजेता पनि हुन् । प्रेमले पनि इन्चोन एसियाड खेलेका थिए ।
जेआई एक्स्पोमा आइतबारै महिलातर्फ ५१ केजी फ्लाइवेटमा विमला श्रेष्ठ मंगोलियाकी जार्गालन ओचिरबाटसँग निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पराजित भइन् । मंगोलियाकी खेलाडीले अंकका आधारमा ४–१ ले जित हासिल गरिन् । बक्सिङमा नेपालले एउटा बाउटमात्र खेल्न बाँकी छ । सोमबार ७५ केजी मिडलवेटमा दीपक श्रेष्ठले चाइनिज ताइपेईका चिवेई कानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
टेबलटेनिसको प्रतिस्पर्धा आइतबार सुरु हुँदा नेपालको महिला र पुरुष दुवैको सुरुआत राम्रो भएन । महिला टिम इभेन्टमा नेपाली टोली मलेसिया र सिंगापुरसँग समान ३–० को गेमले हारेको छ । नेपालकी रविना महर्जन मलेसियाकी कारेन लेयसँग ११–४, ११–५, १२–१४, ११–४, नविता श्रेष्ठ मलेसियाकी ली सिएनसँग १४–१२, ११–९, ११–५ ले र स्वेच्छा नेम्वाङ भने यिङ होसँग ११–८, ११–२ ले हारिन् । चीनसँग नविताले एक सेट जित्दा स्वेच्छा र रविनाले ३–० कै सोझो सेटमै खेल गुमाए ।
मेन्स टिममा नेपालले चीनसँग खेल्नेछ । टेबलटेनिसको शक्ति राष्ट्र चीनका जेन्डोङ फानले अमरलाल मल्ललाई ११–३, ११–४, ११–२ ले, जाझोयान लिनले स्यान्टु श्रेष्ठलाई ११–१, ११–५, ११–३ ले र चुक्विन वाङले दीप साउनलाई ११–६, ११–६, ११–४ ले हराए ।
सेपाकटाक्रोमा पुरुष रेगुतर्फ नेपाल चीनसँग २–० (२१–४, २१–९) ले पराजित भयो । समूह ‘बी’ मा नेपाली टोली मलेसिया र दक्षिण कोरियासँग अघिल्लो दिन पराजित भएको थियो । नेपालले समूहको अन्तिम खेलमा सोमबार भारतसँग खेल्नेछ ।
सेपाकटाक्रोमा गोविन्द मगर, रविन भट्टराई, रूपेश सुनार र सञ्जित धिमालले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । दक्षिणपूर्वी एसियाको परम्परागत खेलका रूपमा रहेको सेपाकटाक्रो सन् १९९० को एसियाडमा पहिलोपल्ट खेलाइएको थियो । त्यसपछि यसै एसियाडमा समावेश गरिएको हो ।
पाराग्लाइडिङको पुरुष टिम क्रसकन्ट्री इभेन्टको दोस्रो चरण सकिँदा नेपाली टोली तेस्रो स्थानमा यथावत् छ । नेपाली टिमले दोस्रो चरणसम्म २९ सय ४९ अंक जोडेको छ ।
नेपाली टिमबाट विमल अधिकारी, विजय गौतम, सुशील गुरुङ, युकेश गुरुङ र विशाल थापाले खेलिरहेका छन् । ३८ सय १८ अंक जोडेर इन्डोनेसिया शीर्षमा छ । दोस्रो स्थानको दक्षिण कोरियाको ३१ सय ३९ अंक छ । २७ सय ७५ अंक जोडेर चौथो स्थानमा रहेको जापानले नेपाललाई पछ्याइरहेको छ ।
महिलातर्फ दोस्रो चरणको खेल सकिँदा नेपाली टिम पाँचौं स्थानमा झरेको छ । महिला टिमले ६ सय ३८ अंक जोडेको छ । टोलीमा प्रतिभा भुजेल, त्रिशा श्रेष्ठ बम्जन र सविता तामाङ छन् । यो इभेन्टमा दक्षिण कोरिया पहिलो, जापान दोस्रो, इन्डोनेसिया तेस्रो र थाइल्यान्ड चौथो स्थानमा छन् ।
वेस्ट जाभामा चलिरहेको पाराग्लाइडिङमा आइतबार मौसमको खराबीका कारण कुनै पनि देशका खेलाडीले २५ किलोमिटर टाक्स पूरा गर्न सकेनन् । क्रसकन्ट्री इभेन्ट पाँच राउन्डसम्म चल्नेछ । बुधबार यस इभेन्टमा पदकको टुंगो लाग्नेछ ।
प्रतियोगिताको अन्तिम दिन पोन्डोक इन्दाह गल्फ कोर्समा नेपाली खेलाडीले औसत प्रदर्शन गरे । शुक्रबहादुर राई ९ ओभर ८१ सहित कुल २७ ओभर स्कोर जोड्दै ५८ औं स्थानमा रहे । टंकबहादुर कार्की ५ ओभर ७७ सहित कुल २९ ओभरको स्कोरसहित ६० औं स्थानमा रहे ।
पृथ्वी मल्लले पनि ५ ओभर ७७ जोड्दै कुल ३६ ओभर स्कोरका साथ ७४ औं स्थान हासिल गरे । अजित विक ११ ओभर ८३ को खराब प्रदर्शन गरेपछि ३९ ओभर स्कोरसहित ७८ औं स्थानमा रहे । जापानका केइटा नाकाजिमाले ११ अन्डर स्कोरसहित स्वर्ण जिते । दक्षिण कोरियाका सुङटेक ओह १० अन्डर र चीनका चेङ जिनले ९ अन्डर स्कोर गर्दै क्रमश: रजत र कांस्य जिते ।
टिम इभेन्टमा नेपाल ८७ ओभर स्कोरसहित १७ औं स्थानमा रह्यो । जापानले २८ अन्डर जोड्दै स्वर्ण जित्दा २१ अन्डर जोडेको चीनले रजत र १९ अन्डर जोडेको दक्षिण कोरियाले कांस्य जिते ।
चीनको अग्रता फराकिलो
१८ औं संस्करणको यस एसियाड नवौं दिनमा चलिरहँदा ३४ राष्ट्रले पदक जितिसकेका छन् । एसियाको ४५ राष्ट्रको सहभागिता रहँदा चीन ७४ स्वर्णपदकसहित १६६ पदक जितेर पहिलो स्थानमा छ ।
जापान ३९ स्वर्णसहित ११८ पदक र दक्षिण कोरिया २६ स्वर्णसहित ९३ पदक जितेर दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । इरान १४ स्वर्णसहित ३९, आयोजक इन्डोनेसिया १२ स्वर्णसहित ४८ र उत्तर कोरिया ११ स्वर्णसहित २३ पदक जितेर शीर्ष पाँच स्थानभित्र रहेका छन् ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा भारतले ७ स्वर्णसहित ३५ पदक जितेर आठौं स्थानमा रहँदा पाकिस्तानले २ कांस्य र अफगानिस्तानले १ कांस्यपदक जितेका छन् । नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्र भने पदकविहीन छ ।
इन्ट्री लिस्टैमा थिइनन् विश्वरूपा
नेपालकी धाविका विश्वरूपा बुढालाई दौड सुरु हुनुपूर्व ट्रयाकबाट बाहिर लग्दै आयोजकका स्वयंसेवक । तस्बिर : एपी
महिला १० हजार मिटर दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्न जकार्ता आएकी नेपाली धाविका विश्वरूपा बुढा मुख्य रंगशाला जेरोला कार्लोको ट्रयाकमा पुग्दा पनि दौडिन पाइनन् । १८ औं एसियाली खेलकुदको शनिबार अपराह्न उक्त इभेन्टको प्रतिस्पर्धामा विश्वरूपाले सहभागिता जनाउन पाइनन् । उक्त इभेन्टको ‘इन्ट्री लिस्ट’ मा आफ्नो नाममै नभएपछि विश्वरूपा ट्रयाकबाट फर्कनुपरेको थियो ।
विश्वरूपा १० हजार र ५ हजार मिटर दौडका लागि एसियाड आएकी हुन् । एथलेटिक्स संघबाट आएको खेलाडी नाम र इभेन्टसँगै प्रतियोगिताका लागि विश्वरूपाको दुवै इभेन्टमा नाम दर्ता गरिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले जनाएको छ ।
खेल हुनु अघिल्लो दिन बस्ने टेक्निकल कमिटीको मिटिङमा कुन खेलाडीले कुन इभेन्टमा खेल्छ, खेलाडीको नाम छ, छैन भन्नेबारे सम्बन्धित खेलका व्यवस्थापक तथा प्रशिक्षकले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । एथलेटिक्समा शान्ति सिंह व्यवस्थापक र आमिरी यादव मुख्य प्रशिक्षक भएर आएका छन् ।
नेपाली एसियाड टोलीका सेभ द मिसन केशवकुमार विष्टले आयोजकको कमजोरीका कारण विश्वरूपाले दौडन नपाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘टेक्निकल मिटिङमा खेलाडी इन्ट्रीबारे हाम्रो व्यवस्थापकले जानकारी गराएका छन् । उतैबाट पनि इन्ट्री गरिएको हो । कसरी छुट्यो ।
आयोजककै कमजोरी हुनुपर्छ । त्यसबारे मैले यहाँ पनि बुझ्न लगाएको छु ।’ खेलाडी तथा एथलेटिक्स अफिसियलले आफ्नो धारणा राखेका छैनन् । ५ हजार मिटरको उनको दौड मंगलबार हुनेछ ।
एथलेटिक्समा सोमबार महिला ८ सय मिटरमा सरस्वती भट्टराई र पुरुषतर्फ सोही दूरीमा सोमबहादुर कुमालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०७:५७